Home » Toerana fitsangatsanganana » Fizahan-tany Israel: 93% ny mpitsidika dia manome isa tsara ny traikefany
Israeliana Minisitry ny fizahan-tany vao avy namoaka ny fanadihadiana farany momba ny fizahantany ao anatiny ary ny vokany dia mamporisika indrindra.
Ny fanadihadiana momba ny fizahan-tany amin'ny taona 2018 dia nifototra tamin'ny valintenin'ny mpizahatany 15,000. Ireto misy sasany amin'ny antsipiriany:
• 93% ny mpizahatany no nametraka ny fitsidihan'izy ireo ho tsara sy tsara
• Vola avy amin'ny fizahan-tany ho avy: manodidina ny 20.88 miliara NIS (tsy anisany ny vidin'ny sidina)
• 53.2% amin'ireo mpizahatany no nilaza fa niova ho tsara ny fomba fijerin'izy ireo ny Isiraely taorian'ny fitsidihany ny firenena; 41% no nilaza fa tsy nampiova ny sain'izy ireo ny fitsidihana ary 1.5% no nilaza fa nanova ny fomba fijerin'izy ireo ny ratsy indrindra
•Jerosalema no tanàna be mpitsidika indrindra (77.5%); ny tranonkala be mpitsidika indrindra dia ny Western Wall (71.6%)
• Salanisan'ny fandaniana isaky ny mpizahatany any Israel: $ 1,402 isaky ny mijanona (tsy misy ny saran'ny sidina)
• Maherin'ny 40% ny mpizahatany nitsidika an'i Israel, indray mandeha
• Manodidina ny 64.8% amin'ireo mpizahatany no tonga tany Israely tsy miankina (FITs)
• 8.7% no nijanona tao amin'ny trano nohofana
Raha naneho hevitra momba ireo tarehimarika ireo ny minisitry ny fizahantany Yariv Levin dia nilaza fa: “Ny taona 2018 dia taona nisian'ny fizahan-tany ho any Israel, miaraka amin'ireo mpizahatany maherin'ny 4 tapitrisa. Ny ankamaroan'ny mpizahatany dia nilaza fa niova ho tsara ny fahatsapan'izy ireo ny Isiraely ary efa ho ny antsasaky ny tonga ny fiverenana mitsidika. ”
Nanambara i Levin fa ny fitomboan'ny fizahan-tany tsy mitsaha-mitombo “dia vokatry ny paikadim-barotra vaovao nataon'ny minisitera,” izay azo antoka fa ao anatin'ny fetran'ny antony.
Zavatra iray no azo antoka. Israel dia manatri-maso ny fitohizan'ity fironana miakatra ity amin'ny taona 2019.
Ny zavatra hita ao amin'ny tatitra isan-taona dia misy:
Ny vola azo avy amin'ny fizahan-tany ho avy amin'ny taona 2018 dia tombanana ho 20.88 miliara NIS (ankoatry ny vidin'ny sidina)
Tanàna be mpitsidika indrindra: Jerosalema amin'ny toerana voalohany misy mpizahatany 77.5%, arahin'ny Tel Aviv (67.4%), Ranomasina Maty (48%) ary Tiberias (36.2%).
Fahafaham-po tamin'ny fitsidihana: 93.3% amin'ireo mpizahatany no nametraka ny fitsidihan'izy ireo ho tsara sy tsara.
Salanisan'ny fandaniana isaky ny mpizahatany any Israel: ny salanisa fandaniana isaky ny mpizahatany any Israel dia tombanana ho $ 1,402 isaky ny fijanonana (tsy tafiditra ny vidin'ny sidina), raha ampitahaina amin'ny $ 1,421 tamin'ny taona lasa. Anisan'izany ny vidiny:
657 $ amin'ny trano onenana (mifanohitra amin'ny $ 630 amin'ny 2017), $ 236 amin'ny fitaterana sy fitsangatsanganana ($ 242 amin'ny 2017), ny vidiny hafa (ao anatin'izany ny fialamboly, fitsaboana, ary isan-karazany) $ 148, mifanohitra amin'ny $ 171 amin'ny 2017; 155 $ amin'ny fiantsenana (mifanohitra amin'ny $ 165; ary $ 207 amin'ny sakafo sy zava-pisotro (mifanohitra amin'ny $ 213 amin'ny 2017).
Manova ny fomba fijerin'i Israel: 53.2% amin'ireo mpizahatany no nilaza fa niova ho tsara kokoa ny fahitany an'i Israel taorian'ny fitsidihany ny firenena, 45.6% no nilaza fa tsy nampiova ny sain'izy ireo izany fitsidihana izany ary 1.2% no nilaza fa nanova ny fomba fijerin'izy ireo ny ratsy kokoa.
Ireo tranonkala be mpitsidika indrindra: Ny efatra amin'ireo tranonkala dimy be mpitsidika indrindra ao Israel dia ao Jerosalema: -ny Rindrina Andrefana (71.6%), ny Fiangonan'i Holy Sepulcher (52.2%), 50.1% ny mpizahatany nitsidika an'i Old Jaffa; Via Dolorosa amin'ny toerana fahefatra (47.4%) sy ny Tendrombohitra Oliva (46.8%). 37.7% no nitsidika ny Seranan-tsambon'i Tel Aviv, 30.9% no nitsidika ny Quartre jiosy tao an-tanàna taloha, 26.8% Masada, Kapernaomy 26.6% ary ny 25.3% nitsidika an'i Kaisaria.
Taonan'ireo mpizahatany: 20.7% ny mpizahatany dia 24 taona no ho midina, 35.8% no teo anelanelan'ny taona 25-44, 19.4% teo anelanelan'ny 45-54 sy 24.1% 55 taona no ho miakatra.
Fikambanam-pinoana: Maherin'ny antsasaky ny mpizahatany mitsidika an'i Israel no Kristiana (54.9%), mihoatra ny ampahefatry ny jiosy (27.5%), ary manodidina ny 2.4% dia Silamo. 42.8% ny Kristiana rehetra dia Katolika ary 30.6% Protestanta.
Ny tanjon'ny fitsidihan'izy ireo: 24.3% no namaritra ny fitsidihan'izy ireo ho an'ny tanjona fivahinianana masina, 21.3% ho an'ny fitsangantsanganana sy fitsangatsanganana, 30% ho an'ny havana aman-tsakaiza, 10.3% ho an'ny fialamboly sy fialamboly, 8.9% ho an'ny orinasa sy ny delegasiona, ary ny 1.2% ho an'ny tanjona hafa.
Ireo tranonkala voatazona tsara indrindra any Israel: Ny mpizahatany dia nilahatra ny seranan-tsambo Tel Aviv (31.3%) ho toerana tsara fikojakojana indrindra any Israel, Masada no faharoa (26.2%) ary fahatelo ny Museum of Art Tel Aviv (21.1%).
Loharanom-baovao: 19% amin'ireo mpizahatany no nilaza fa nahazo fampahalalana momba an'i Israel avy amin'ny maso ivoho na mpandraharaha fizahan-tany, 18.6% avy amin'ny havana / namana ary 62.5% avy amin'ny loharanom-baovao hafa.
Ny talen'ny jeneraly misahana ny fizahan-tany Amir Halevi dia nanamarika fa ny fitomboan'ny fizahan-tany miditra amin'ny taona 2018 dia mitohy hatramin'ny taona 2019. "Manodidina ny 365,000 ny fidiran'ny mpizahatany voarakitra tamin'ny Jona 2019, 17.7% mihoatra ny Jona 2018 ary 20.5% mihoatra ny Jona 2017. Tamin'ny vanim-potoana Janoary - Jona 2019, 2.265 tapitrisa ny fidiran'ny mpizahatany voarakitra, mifanohitra amin'ny 2.063 tapitrisa tamin'io vanim-potoana io tamin'ny taon-dasa, fitomboana 9.8%. Ny vola azo tamin'ny fizahan-tany tonga tamin'ny volana Jona dia nitentina 1.9 tapitrisa NIS ary, hatramin'ny fiandohan'ny taona, dia 11.7 tapitrisa NIS. "